Home > Products > LED Strip Light > White COB Strip LED > 10W 378 Leds / M 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light Light သည်အရောင်မဲ့အလင်းရောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိသည်။ SMD ဒီဇိုင်းထက်ရောင်ခြည်ထောင့်သည် ၁၈၀ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကိုနောက်ကျောဘက်ရှိ 3M ကော်တိပ်ဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ ဗီဒိုများ၊
10W 378 leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB ၏အဖြူရောင် COB ၏ 2. Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
Product name: 10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED strip light အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - IP20, IP65, IP67
Model No.: ခြင်္သေ့ -LWD24BB20-D9-210 operating Temp .: -25°C~ +45°C
FPC Width: ၈ မီလီမီတာ Storage Temp.: -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ + 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလင်းအရင်းအမြစ်: COB LED Standard Length: ၅ မီတာ
COB quantity: 210 pcs / m Cuttable length: 100mm
LED အရောင်: အဖြူရောင် Certification: အီး, RoHS, FCC က
Color Temp.: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K အာမခံချက် -3years
SDCM ‰¤5 ထုပ်ပိုးနည်းလမ်း:5မီတာ / reel / အိတ်
Luminous Flux: 800lm / m သေတ္တာအရွယ်အစား: 500*356*206mm
ပါဝါ: 10W / m လျှောက်လွှာ ထောင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ပုံထွန်းခြင်း၊ KTV၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် 10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip light ကိုအသုံးပြုပါ
၄။ ထုတ်ကုန်အရည်အတွက် 10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light
10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light ၏အာမခံကာလသည် ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းချွတ်ယွင်းသောနမူနာအမှာစာ (၂ ပီစီအောက်) မွာကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ASAP အစားထိုးခြင်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချွတ်ယွင်းမှုများအတွက်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ အစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုသင်နောက်တစ်သုတ်တွင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းပို့မည်။
10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip light ကိုဖြန့်ဝေခြင်း၊ သဘောင်္တင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ 10W 378 Leds / m 24V 8mm အဖြူရောင် COB LED Strip Light သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကြောင့်ဝတ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိစေရန်မိုးသည်းထန်စွာရွံ့သောပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာထုပ်ထားသည်။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
hot Tags:: 10W 378 Leds/M 24V 8mm White COB LED Strip Light, Manufacturers, Suppliers, Wholesale, Buy, Factory, Customized, Made in China, Free Sample, Price List, Advanced, Fashion, Quality